Miraondraona Ny Bilaogy Ao Bangladesh · Global Voices teny Malagasy
Miraondraona Ny Bilaogy Ao Bangladesh
Voadika ny 09 Oktobra 2017 1:39 GMT
(Marihina fa tamin'ny 28 Jona 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Ny zava-nitranga farany indrindra tao Bangladesh izay mampifandray ny bilaogy manerantany:
* Fizahan-tany : Nitsidika an'i Mainamati izay ahitana ny toerana arkeolojika bodista maromaro ny mpizahatany iray tao Bangladesh.
* Sary: Namoaka ny sarin'i Sonargaon i Zev , renivohitry ny fanjakàn'i Isa Khan teo aloha ao Bengal. Eo akaikin'ny tanàndehiben'i Narayanganj ankehitriny ao Bangladesh no misy azy. Sary maromaro avy amin'i Zev ahitana an'i Dhaka fahiny, renivohitr'i Bangladesh ankehitriny.
* Fiarahamonina: Miresaka momba ireo olana lehibe roa ao amin'ny fiarahamonina Bangladeshita “Rahoviana no tokony hanambady“: Aloha sa aorian'ny fahavitan'ny fianarana? ny bilaogin'i Adhunika, ary ny momba ny toeran'ny vehivavy tsy manam-bady eo amin'ny fiarahamonina .
* Fanadihadiana: Manadihady momba ny sarimihetsika Bengali: Ontorjatra (Tanindrazana) novokarin'i Tareque Masud sy i Catherine Masud ilay mpanao gazety Ahmede Hossain.
* Fivavahana: Nahita i Sadiq tao anatin'ny fikatsahana ny fahamarinana sy ny fahamasinana fa nandeha tany India ihany koa i Jesoa.
* Mondialy: Nanoratra ny fomba tena mahatonga ny saimbôlisma ateraky ny baolina kitra ho tena mampihetsi-po i Shafiur. Namaritra ny fihofahofam-panevam-pirenena hita teny rehetra eny i Mezba .
* Bilaogy sy fihariana: Nanamarika i Razib avy ao amin'ny South Asia Biz Blog fa afaka manampy ireo orinasa any Azia Atsimo mba hiroborobo ny bilaogy.
* Fonenana: Leo an'ilay Amerikana mpifanolo-bodirindrina aminy ilay vahiny teratany Holandey monina ao Dhaka.
* Famahanana bilaogy Bangla : ” Omeo kahie aho dia hanome anao vondrom-piarahamonina ” – Hasin Hayder ilay lehilahy ao ambadiky ny sehatra famahanana bilaogy mahatalanjona Bangla “Somewhereinblog.net” dia nanoratra ny fomba nahaterahan'izany sy ny fivoarany farany. Manana eritreritra ny hampivelatra izany amin'ny vondrom-piarahamonina midadasika kokoa izy.